dhimashada World Evangelist Reinhard Bonnke ee | Apg29
Malaayiin booqday shirarka iyo qof ayaa had iyo jeer la badbaadiyey.
Dad badan ayaa la badbaadiyey ka dib markii uu khudbada ka dibna wuxuu u baryay kuwa buka. Markaasuu dib naagtii ku curyaan uu ka yimaado, wuxuu gacanta khafiif on wejiga saaray, ka dibna iyada oo u safraya, dabadeedna waxay bilowday inay ku socdaan.
Reinhard Bonnke ahaa wax wacdiyi jiray dunida Christian iyo wacdiya. Inuu sameeyo shuqulkiisa wacdinta bilaabay in 1970 oo lahaa shirarka ee ku jirtay teendhada weyn. Later, marka kulamada helay weyn uu ka soo dhaqaaqay garoonka weyn. In Nigeria booqday malaayiin kulan uu.
Reinhard Bonnke ahayd 79 sano jir. Sawirka kor ku xusan waa ka 2014 iyo waxa laga soo qaatay Wikipedia.
Dadka ayaa had iyo jeer la badbaadiyey
Anigu waan maqlay Reinhard Bonnke dhawr jeer oo dadka mar walba helay badbaadiyey wacdiyaya. Waxaa la rumeysan yahay in ilaa 75 milyan oo heshay Ciise Masiix iyo ka ahaa badbaadiyey by hawshiisu wacdinta!
Waxa uu dadka ka dhex wacdiyi olole weyn usoo nooleynta dunida oo dhan, oo u shaqayn jiray 60 sano sida wacdiye. Dhowr jeer ayaa sidoo kale booqday Bonke Sweden. Sidoo kale halkaan ayaa dadka badbaadiyey iyada oo uu wasaaradda.
Dhowr sano ka hor markii aan u tegey inuu Bible School Bentakostiga ee kaniisadda Pentecostal Jönköping waxaan tegey safar fasal ee Yurubta Bari, laakiin muhuumsan our safar bas in magaalada Hannover ee West Germany oo casri ah iyo dhegaystay Reinhard Bonnke ee dibad olole.
Dad badan ayaa la badbaadiyey ka dib markii uu khudbada ka dibna wuxuu u baryay kuwa buka. Markaas ayaan ogaaday qof dumar ah oo ku fadhiya kursiga curyaamiinta. Kolkaasuu gacmihiisa saaray kuwii soo gaaray, sidaasi darteed xitaa naagta curyaan ah, ka dibna wuu sii socday. aad si taxadir leh wax baan fiiriyey si aad u aragto haddii ay wax u dhaceen. Laakiin waxba ma dhicin.
Markaasuu dib naagtii ku curyaan uu ka yimaado, wuxuu gacanta khafiif on wejiga saaray, ka dibna iyada oo u safraya, dabadeedna waxay bilowday inay ku socdaan. Waxaan ahaayeen on safarka ayaa si cad u yaabayaan oo rumaysan kari waayeen indhahayaga. Anigu garan maayo waxa ay ahayd qalad ah, iyada oo leh, laakiin waan ogahay kor bay u kacay oo u tegey.
malaayiin ku guuleystay waayo, Ciise Masiix
Hogaamiyaha Swedish Pentecostal The Daniel Alm qoraal on twitter :
"Reinhard Bonnke guuleysatay malaayiin Masiix. Oo aad u badan, isaga waxaan mahad. Wuxuu ahaa mid wax wacdiya Pentecostal classical. Waxaan xusuustaa markii aan maqlay in Berlin, Sweden iyo goor danbe oo 2018 ku hor xasilloonow nabad, Mr. Helsinki." Ich bin Evangelist! " .
Maanta, wax wacdiyi jiray guriga Reinhard Bonnke Ciise ka dib camal fiican u fulineynin uu wax wacdiyi jiray!